Train Travel Spain Archives | စာမျက်နှာ3၏3| တစ်ဦးကရထား Save
ဥရောပစူးစမ်းဖို့မယုံနိုင်စရာတိုက်ကြီးဖြစ်ပါသည်! ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာကိုမြင်မှုနှင့်အတူ, မ Discover, ဒါဟာအဆုံးမဲ့စီစဉ်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောအရပ်ဌာနဖွင့်, ရထားဥရောပအတွေ့အကြုံများ. ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးရေးသားခဲ့ခြင်းနှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်, The Cheapest Train…
စပိန်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းနှင့်တက်ကြွသောမီးရထားဘူတာရုံ၏နံပါတ်ရှိပါသည်. သင်တွေ့လိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း, အလတ်စားအကွာအဝေး, ဒေသဆိုင်ရာ, တိုင်းပြည်တစ်လျှောက်လုံးမြို့ပြနှင့်ဟိုတယ်-မီးရထားခရီးသွားလာ. ကြီးမားသောခေတ်သစ်ဘူတာကနေသဘာဝကဝိုင်းသေးငယ်သူတို့ကို, ဤအရာများသည် 10 of Spain’s most Fascinating Train…
စျေးပေါဥရောပခရီးစဉ်ပူပြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ဥရောပမှာခရီးသွားဧည့်ကြီးမြတ်ကော်ဖီဆိုင်များအနေဖြင့်လှပသောကမ်းခြေမှအရာအားလုံးကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်. ဗင်းနစ်နဲ့တူမြို့ကြီးများ၏ရလဒ်အဖြစ်, ရောမမြို့, နှင့်ခရီးသွားဧည့်များ၏ပဲရစ်သန်းပေါင်းများစွာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဥရောပခရီး. ကျနော်တို့စျေးအသက်သာဆုံးစာရင်းတစ်ခုဖန်တီး…
ဥရောပ၌ဤမျှလောက်များစွာသောလှပသောမြို့ကြီးများရှိပါတယ်, နှင့်ပိုပြီးဘာ, ထိုသူအပေါင်းတို့သွားရောက်နိုင်အောင်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖွင့်. ရထားလမ်းအားဖြင့်ခရီးသွားလာဤအရေပုံး-စာရင်းနေရာများကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဒီမှာပါ3အကောင်းဆုံးရထားလည်ပတ်ခဲ့ဥရောပမြို့ကြီးများ. ဤဆောင်းပါးသည်ပညာပေးရန်ရေးသားခဲ့သည်…
အတော်များများကကမ်းခြေအားလပ်ရက်စိတ်ဖိစီးမှုပျံသန်းမှုနှင့်အတူစတင်, ဘတ်စ်ကား, နှင့်ကူးတို့, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးပိုမိုလွယ်ကူစွာလမ်းရှိပါတယ်. မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြဤမျှလောက်များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်, သင်သည်သင်၏အားလပ်ရက်ပင်စတင်ဖွင့်ရှေ့တော်၌ကိုယ်စိတ်အေးလက်အေးခံစားထွက်ခွာ. သင်သည်သမုဒ္ဒရာတစ်ဦးအမြင်နှင့်အတူတစ်အရသာမုန့်ညက်ရှာနေရှိမရှိသို့မဟုတ်…